चुनावी गठबन्धनबाट संविधानलाई खतरा ! access_timeजेठ २, २०७९
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संघीयतामा ‘शक्तिको बाँडफाँट हुने भएकाले सबै नेताले जप्ने नारा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवार’ पनि केही हदसम्म पुगेको हामीले आभास गर्न पाएका छौं । लामो रस्साकस्सी र सन्देहका बाबजुद स्थानीय नि...
काठमाडौंलाई पत्र access_timeजेठ १, २०७९
मेरो प्यारो काठमाडौं, भन्छन् आफूलाई दुःख पर्दा आफूजस्तै दुःखीको सम्झना आउँछ रे । त्यस्तै आज मलाई सञ्चो नभएर घर बस्दा बिचरा तिमी त बिरामी भएको निकै नै भइसक्यो भन्ने सम्झिए । म त छिटै ठिक भएर हिँड्छु । तिमीलाई ठिक पार्ने कसरी पो होला म चिन्तित छु । सानै थिएँ म । ह...
विगतको गल्तीबाट पाठ : असल उम्मेदवारको खोजी access_timeबैशाख २७, २०७९
जनताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, मोनो रेल, मेट्रो रेल, चौडा बाटो, घरघरमा विकास लगायतका अघिल्लो वर्षका केही चर्चित चुनावी नारा सेलाउन नपाउँदै आगामी चुनावको लागि नयाँ नारा असरल्ल छन् । पाँच वर्षअघि चुनावी वाचा र घोषणापत्रमा समावेश गरिएका कति योजना पुरा भयो ? यसको स...
लोकतन्त्रमा लिङ्देन र आरक्षणको सवाल access_timeबैशाख २६, २०७९
तीन दशकको इतिहास बोकेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गत एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आए, एक जनजातिको छोरो राजेन्द्र लिङ्देन । पूर्वपञ्चहरुको दलको उपमाले चिने यस दलको शीर्ष नेतामा क्षेत्री र ब्राह्मण समुदायकै हालीमुहाली थियो । त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि आ...
भोट युवालाई कि अनुभवीलाई ? access_timeबैशाख २५, २०७९
केही दिन अघि म नजिकैको बजारमा किनमेल गर्न जाँदा आधा दर्जन जति युवाहरु चिया पसलमा निकै जोड जोडले गफिदै थिए । तिनीहरुको कुरोको केन्द्रविन्दु राजनीतिमा युवा आउनुपर्छ भन्ने थियो । सायद चुनाव लागेर होला, के सहर, के गाउँमा त्यस्ता राजनीतिक गफ गर्ने झुण्ड थुप्रै छन् ।&nbs...
‘गधा सधैँ गधा नै रहन्छ’, इमरान खानले आफ्नाबारे किन यसो भने ? access_timeबैशाख २५, २०७९
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोल भइरहेका छन् । उनले आफूलाई गधासँग तुलना गरेपछि उनी ट्रोलको शिकार भएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा क्लिपमा इमरान खानले भनेका छन्, ‘ गधामाथि धर्सो कोरिदिए त्यो जेब्रा बन्दै...
सवारी साधनमा ‘देवनागरी लिपि’को प्रयोगः आवश्यकता र औचित्य access_timeबैशाख २४, २०७९
इतिहासको प्रारम्भिक चरणदेखि नै देवभूमि, वेदभूमि, बुद्धभूमि र देवादिदेव महादेव र महामाया माता पार्वतीको बासस्थानका रूपमा प्रसिद्धिको शिखर पुञ्जका रूपमा रहेको नेपाल भूमिले संसारमा भएका कुनै पनि मानव समुदाय र समाजको हित–कल्याण एवं शान्ति र समन्वय गर्नेबाहेक अहि...
हिटलरको खुइल्याइएको भाले र स्थानीय चुनाव access_timeबैशाख २१, २०७९
हिटलरसँग संसद् छिरेको कुखुराको भालेको प्रसंग जोडिएको कथा धेरैले सुनेको हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय चुनावमा यो कथा सान्दर्भिक हुने भएकाले एक पटक दोहोर्याउन मन लाग्यो । एक दिन जर्मन चान्सलर एडल्फ हिटलर कुखुराको भाले काखी च्यापी संसद छिरेछन् । सधैं तनाव र आक्रोशित मुद्रामा...
निर्वाचनमा बालबालिकाको निर्वाध प्रयोग, घोषणापत्रमा खै तिनका अधिकारबारे प्रतिबद्धता ? access_timeबैशाख १६, २०७९
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या अन्य जुनसुकै तहको निर्वाचन होस्, राजनैतिक पार्टीहरुले बालबालिकाको प्रयोग गर्नु गलत र गैरकानुनी काम हो । यसमा राजनैतिक दल र उम्मेदवारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बालबालिकाकाको प्रयोग गर्ने तर बालबालिका केन्द्रीत र सरोकारका परिवर्तनकार...
आखिर महिला हिंसा कहिलेसम्म ? access_timeबैशाख १४, २०७९
सबैले नयाँ वर्षको दिन वैशाख १ गते राम्रा राम्रा उपहार पाए, मीठो मीठो खान पाए, रमाइलो मेला महोत्सवमा घुम्न गए । तर रुपन्देही, तिलोत्तमा नगरपालिका–२ जानकीनगरकी अमृता खत्रीले नयाँ वर्षको दिन आफ्नो घरपरिवार र लोग्नेबाट मृत्यु उपहार पाइन् । उनी केही दिनदेखि माइतीम...
सत्ताका निम्ति दलित भोट बैंकको राजनीति access_timeबैशाख १२, २०७९
आधुनिक नेपालको निमार्णदेखि नै अभूतपूर्व र विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको छ दलित समुदाय । यस समुदायको २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ को जनआन्दोलनसम्म, २०५२ को सशस्त्र विद्रोहदेखि २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म महत्वपूर्ण योगदान छ । देशमा लोकतन्त्र, संघीय र समानुपातिक ...
दलहरू गरिबको झुपडीमा चुनावताका मात्रै किन पुग्छन् ? access_timeबैशाख ११, २०७९
स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारीसँगै अवको केही साता नेताहरुले भाषणमा देशलाई अमेरिका र स्वीजरल्याण्ड भन्दा कम विकसित वनाउने छैनन् । उम्मेदवारहरुले आफ्नो दलको योजना भन्दा पनि एक दलले अर्काे दललाई सत्तोसरापको भाषण मात्रै थमाउँदै छन् । भाषणमा रमाउने, उत्तेजित हुने, ताली पड्काउन...
स्थानीय तहमा गठबन्धनः संवैधानिक छिद्रको बलमा लोकतन्त्रको दोहन access_timeबैशाख ७, २०७९
नेपालको संविधान जारी भएपछिको स्थानीय तहको २०७४ मा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समाप्त हुनै लागेको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरु उम्मेदवार टुङ्गो लगाउनमा व्यस्त छन् । विभिन्न बाचाहरू लिएर स्थानीय जनप्रतिन...
घुमघाम : सूर्योदय दृष्यका लागि प्रख्यात श्रीअन्तु access_timeबैशाख ६, २०७९
इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा पर्ने श्रीअन्तु सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सुन्दरताले अन्माउन लागेको दुलही जस्तै सिँगारिएको छ । समुद्री सतहबाट करिब २३०० मिटर उचाइमा पर्ने श्रीअन्तु सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य अवलोकनको लागि देशकै पहिलो गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । दृष्यावलोकनका ल...
मधेस प्रदेशमा ५० प्रतिशत निर्वाचन केन्द्र किन अति संवेदनशील ? access_timeबैशाख ५, २०७९
हालै निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने मधेस प्रदेशमा कुल २१६३ मतदान केन्द्र मध्ये १०६५ अर्थात् करिब ५० प्रतिशत अति संवेदनशील केन्द्र रहेको छ । यो एउटा विचारणीय प्रश्न हो कि आखिर किन देशको करिब ६.५६ प्रतिशत भूभाग अगोटेको, कुल जनसंख्याको २०....
हाम्रो भान्छा कहिलेसम्म असमावेशी ? access_timeबैशाख ३, २०७९
नेपाली समाज विश्व परिवेश भन्दा फरक परिवेशमा हुर्केको समाज हो । यहाँका हरेक चालचलन रितिरिवाज अरुका लागि नौला र अनौठो लाग्छन् । हेर्दा सामान्य लाग्ने कुराहरू पनि जीवनमा ठुलो महत्व राख्दछ । खाना जीवन जिउने महत्वपूर्ण आधार हो । खानाको कुरा गर्दा किचेन वा भान्छाका कुरा प...
सर्वोच्चको फैसलाले के अब एलएलबीको पढाइमा रोक लाग्ने नै हो ? access_timeचैत २९, २०७८
कानुनी शिक्षाको सम्बन्धमा हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । रिट निवेदक यज्ञमणि न्यौपाने विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त बेन्चले फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा अब...
मेयर बन्न किन लालायित छन् जो कोही ? access_timeचैत २९, २०७८
अहिले के गाउँघर, के सहरबजार चुनावी माहोलले तातेको छ । आकांक्षीमाथि आकांक्षीको ओइरो छ । टिकट पाउने ‘कन्फर्म’ भएकाहरु एकसे एक दावा र विकासको मोडल लिएर चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । पुरानादेखि नयाँ नयाँ अनुहारहरु राजनीतिक बजारमा परिवर्तन र इमान्द...
नेताहरूलाई ‘महाराजा’ बन्ने इच्छा access_timeचैत २७, २०७८
राणा शासनको परिवारिक घेराभित्र संकुचित भएर राजसंस्था बसेको थियो । राणाहरुको ठाँटबाँट र रहनसहनले राजाहरुलाई भित्रभित्रै उकुसमुस भएको कुरा राजा त्रिभुवनका भनाइ र भोगाईले पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले राजा र प्रजा मिलेर २००७ साल फागुन ७ मा प्रजातन्त्र ल्याएको कुरा जगजाहेर...
चार वर्षमा रेनु दाहालले के गरिन् ? access_timeचैत २४, २०७८
भरतपुर महानगरको प्रमुखका लागि पाँच वर्षअघि रेनु दाहालले टिकट पाएकी थिइन् । त्यसबेला ‘किन भरतपुरको भूगोल नबुझेको व्यक्तिलाई उठाउने ?’ भन्ने हामी धेरैलाई लागेकै हो । उनी दलबलसहित निर्वाचनमा होमिइन् । रिपोर्टिङको क्रममा उनको टिमसँग दैनिकजसो सम्पर्कमा म पनि...
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका चुनौती access_timeचैत २१, २०७८
टेकराज पन्थी दूध खानका लागि गाईभैँसी पालिन्छ । दूध दिन छोडेपछि थारा भैँसी मासु व्यवसायीलाई बिक्रीवितरण गरिन्छ । काटेर मासु बेच्ने तथा विभिन्न ममः रेस्टुराँहरूमा किमा बनाइन्छ । तर थारा, बेत बसेका वा दूध दिन छोडेका र बिरामी गाईगोरु चाहिँ बेवारिसे अवस्...
अर्थमन्त्रीविरुद्ध चलेको प्रचार युद्ध access_timeचैत २०, २०७८
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगेको सर्वविदितै छ । यो हाम्रो मुलुकको मात्रै समस्या नभई विश्वव्यापी हो । अन्तरनिर्भर विश्वमा एक देशमा हुने सामान्य घटनाले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । कोरोनाले विश्वव्यापी आतङ्क सिर्जना ग...
यूएई दूतावासलाई खुला पत्र access_timeचैत २०, २०७८
आदरणीय नेपाली दूतावास, संयुक्त अरब इमिरेटस् ! नेपालीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व, देशको कूटनीतिक मर्यादा तथा आफ्ना देशका नागरिकले विदेशी भूमिमा भोग्ने गरेका सुख र दुःखको छहारी तिम्रो कार्यालय बन्नुपर्ने होइन र ? कुनै नेपालीले नेपालमै हुँदा व्यक्तिगत विच...
पत्रकार आचारसंहिताः परिपालनामा समस्या access_timeचैत १७, २०७८
हरेक पेशा व्यवसायलाई व्यवसायिक, मर्यादित र सम्मानित बनाउन आचारसंहिताको आवश्यकता पर्दछ । आचारसंहितालाई नैतिकताको दस्तावेज पनि भनिन्छ । नैतिकता भन्ने कुरा लिखित नै हुनु पर्छ भन्ने छैन । के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा व्यक्तिको विवेक र सामाजिक सदाचारसँग जोडिएको...